Yesu Rekɔ Yerusalem no, Ɔkyerɛkyerɛe Nkurɔfo | Yesu Asetena
YESU NUANOM ANNYE NO ANNI
ADƐN NTI NA ƐSƐ SƐ AHENNI ADWUMA NO HIA YƐN?
Ná Yesu atena Galilea kakra ayɛ ne som adwuma no wɔ hɔ. Nkurɔfo tiee n’asɛm no wɔ hɔ sen Yudea. Afei nso, bere a ɔwɔ Yerusalem wɔ Yudea a Homeda duu so no, ɔsaa ɔbarima bi yareɛ. Ɛno “koraa na ɛmaa Yudafoɔ no hwehwɛɛ sɛ wɔbɛku no.”—Yohane 5:18; 7:1.
Afe 32 sutɔbere no dui no, na Yesu wɔ Galilea. Ná Asese Afahyɛ no abɛn. Afahyɛ no, na wɔde nnanson na ɛdi, na ɛda a ɛtɔ so nwɔtwe no, na wɔyɛ nhyiam kɛse. Sɛ Israelfo twa wɔn nnɔbae nyinaa wie wɔ afe no mu a na wɔdi saa afahyɛ no. Ɛdu afahyɛ no so a, wɔgye wɔn ani na wɔda Onyankopɔn ase.
Yesu nuanom Yakobo, Simon, Yosef ne Yuda ka kyerɛɛ Yesu sɛ: “Firi ha kɔ Yudea.” Yerusalem wɔ Yudea, na ɛhɔ na na asɔrefie no wɔ, enti ɛdu afahyɛ mmiɛnsa no so a, nnipa ba bɛhyɛ kurom hɔ ma. Yesu nuanom ka kyerɛɛ no sɛ: “Obiara nni hɔ a ɔbɛyɛ adeɛ kokoam berɛ a ɔpɛ sɛ afoforɔ hu no. Sɛ woyɛ yeinom a, yi wo ho adi kyerɛ wiase no.”—Yohane 7:3, 4.
Asɛm no ara ne sɛ, na ne nuanom no “nnye no nni” sɛ ɔne Mesia no. Nanso na wɔpɛ sɛ Yesu yɛ anwonwade ma wɔn a wɔaba afahyɛ no ase no hu. Sɛ Yesu tie wɔn na ɔyɛ anwonwade biara a, ɔno ara nim nea ɛbɛfiri mu aba. Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Wiase no nni deɛ ɛbɛgyina so atan mo, na me deɛ, ɛtan me, ɛfiri sɛ medi ne ho adanseɛ sɛ ne nnwuma yɛ bɔne. Monkɔ afahyɛ no ase; me deɛ, mennya nkɔɔ afahyɛ yi ase, ɛfiri sɛ me berɛ nnuruiɛ.”—Yohane 7:5-8.
Yesu nuanom ne akwantufo a aka no siim kɔɔ Yerusalem, nanso ɔne n’asuafo no deɛ, wɔtwɛn kakra, na wɔrekɔ nso wɔamma nkurɔfo anhu wɔn. Wɔamfa kwan a nkurɔfo taa fa so kɔ Yerusalem a ɛbɛn Yordan Asubɔnten no. Mmom wɔfaa bomkwan a ɛnam Samaria no. Ná ɛsɛ sɛ Yesu ne n’asuafo no nya baabi a ade sa a, wɔbɛda. Enti ɔsomaa nkurɔfo dii wɔn anim sɛ wɔnkɔpɛ baabi mma wɔn. Esiane sɛ na Yesu rekɔ Yerusalem akɔdi Yudafo afahyɛ nti, kuro baako bi mufo deɛ, na wɔmpɛ wɔn anim ahwɛ mpo na kampɛsɛ wɔagye wɔn ahɔho. Wei maa Yakobo ne Yohane bu fui, na wɔbisaa Yesu sɛ: “Awurade, wopɛ sɛ yɛka ma egya firi soro bɛtɔre wɔn ase?” (Luka 9:54) Wɔn ano sii ara pɛ na Yesu kaa wɔn anim. Afei wɔtoaa wɔn akwantu so.
Wɔnam kwan so rekɔ no, ɔkyerɛwfo bi ka kyerɛɛ Yesu sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfoɔ, mɛdi w’akyi akɔ baabiara a wobɛkorɔ.” Yesu nso ka kyerɛɛ no sɛ: “Sakraman wɔ abɔn na ewiem nnomaa wɔ mpirebuo, nanso onipa Ba no nni baabi a ɔde ne ti bɛtoɔ.” (Mateo 8:19, 20) Nea na Yesu reka ara ne sɛ, sɛ ɔkyerɛwfo no ba bɛdi n’akyi a, ɔremfa no ahogono. Nanso ɛbɛyɛ sɛ ɔkyerɛwfo no nyaa adwene sɛ ɔno deɛ, asetena a ɛte saa mfata no. Enti momma yɛn nso yɛmmisa yɛn ho sɛ, ‘M’ani abere paa sɛ mɛdi Yesu akyi?’
Yesu ka kyerɛɛ ɔbarima foforo sɛ: “Di m’akyi.” Nanso ɔbarima no yii ano sɛ: “Ma me kwan ma menkɔsie me papa ansa.” Ná Yesu nim ɔbarima no fie asɛm, enti ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ma awufoɔ nsie wɔn awufoɔ, na wo deɛ, kɔka Onyankopɔn ahennie no kyerɛ.” (Luka 9:59, 60) Wotumi hu sɛ na ne papa nwui, ɛnte saa a anka saa bere no, ɔne Yesu rennyina hɔ nkasa. Ná Yesu pɛ sɛ ɔbarima no ma Onyankopɔn Ahenni ho hia no sen biribiara, nanso ɔno deɛ na ɛnyɛ hɔ koraa na n’adwene da.
Bere a wɔrebemmɛn Yerusalem no, ɔbarima bi nso bɛka kyerɛɛ Yesu sɛ: “Mɛdi w’akyi, Awurade; nanso ma me kwan ma menkɔkra me fiefoɔ ansa.” Yesu buaa sɛ: “Obiara nni hɔ a ɔde ne nsa akɔsɔ funtumdadeɛ mu na ɔhwɛ nneɛma a ɛwɔ n’akyi a ɔfata Onyankopɔn ahennie no.”—Luka 9:61, 62.
Sɛ obi si ne bo sɛ ɔbɛyɛ Yesu suani a, ɛsɛ sɛ ɔde n’adwene nyinaa si Ahenni adwuma no so. Sɛ obi kura funtumdadeɛ mu na sɛ ɔtwitwa n’ani a, ɛbɛma nea ɔreyɛ no akyea. Sɛ ɔgyae dadeɛ no si hɔ kɔhwɛ n’akyi a, adwuma a ɔreyɛ no bɛka. Sɛ obi san de n’adwene kɔ wiase nhyehyɛe dada yi so a, saa na ne tebea te. Ɛba saa a, ɔbɛtumi amane afiri kwan a ɛkɔ daa nkwa mu no so.
Yesu nuanom nnan no, na wɔhu Yesu sɛn?
Adɛn nti na Samariafo no amma Yesu baabi anna? Dɛn na na Yakobo ne Yohane pɛ sɛ wɔyɛ?
Yesu nam kwan so no, nkɔmmɔ bɛn na ɔne nnipa mmiɛnsa bi bɔe? Dɛn na ɔsii so dua wɔ Onyankopɔn som ho?